INQUBOMGOMO YOKUVIKELA - I-NJ & NY Yezindlu Nezindlu, i-Selectate, Ukudalulwa Kwezokuvikela kanye nabameli Bokuqothula
Kugcine ukuvuselelwa ngoJanuwari 10, 2018
AmaHhovisi Omthetho kaPatel, uSoltis kanye noCardenas (“thina” noma “thina” noma “thina”) ahlonipha ubumfihlo babasebenzisi bethu (“umsebenzisi” noma “wena”). Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza ukuthi siqoqa, sisebenzisa, sidalule futhi sivikele imininingwane yakho kanjani lapho uvakashela iwebhusayithi yethu www.focuselaw.com kufaka noma yiliphi elinye ifomu lezindaba, isiteshi sabezindaba, iwebhusayithi yeselula, noma uhlelo lokusebenza lweselula oluhlobene noma oluxhumeke lapho (ngokubambisana, i- " Isiza ”). Sicela ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo ngokucophelela. UMA UNGAVUMI NGEMISEBENZI YALO MGOMO WOKUFUNDA, SICELA UNGALITHOLI ISITOLO.
Sigodla ilungelo lokwenza ushintsho kule Nqubomgomo Yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi futhi nganoma yisiphi isizathu. Sizokwazisa nganoma yiziphi izinguquko ngokuvuselela idethi ethi “Kubukeziwe” yale Nqubomgomo Yobumfihlo. Noma yiluphi ushintsho noma ukulungiswa kuzosebenza ngokushesha lapho uthumela inqubomgomo yobumfihlo ebuyekeziwe kusayithi, futhi ulawula ilungelo lokuthola isaziso esithile solo shintsho noma ukuguqulwa okuthile. Ukhuthazwa ukuthi ubukeze le Nqubomgomo Yobumfihlo ukuze uhlale unolwazi ngezibuyekezo. Uzothathwa ngokuthi uye waqashelwa, uzokhonjelwa phansi, futhi uzothathwa ngokuthi wamukele izinguquko kunoma iyiphi inqubomgomo Yobumfihlo ebuyekeziwe ngokusebenzisa kwakho okuqhubekayo kwesayithi ngemuva kosuku lokuvunyelwa kwenqubomgomo enjalo yobumfihlo.
Ukuqoqwa KULWAZI LAKHO
Singaqoqa imininingwane ngawe ngezindlela ezahlukahlukene. Imininingwane esingayiqoqa kusayithi ifaka phakathi:
Imininingwane ekhonjwa ngumuntu, efana negama lakho, ikheli lokuthumela, ikheli le-imeyili, nenombolo yocingo, kanye nemininingwane yenombolo, efana nobudala bakho, ubulili, idolobhakazi lakho kanye nezintshisekelo zakho, ongazinikeza ngokuzithandela lapho ubhalisa neSayithi noma lapho ubhalisa khetha ukubamba iqhaza emisebenzini ehlukahlukene ehlobene neSayithi, enjengezingxoxo ze-inthanethi namabhodi emiyalezo. Awuphoqelekile ukuthi usinikeze imininingwane yomuntu yanoma iluphi uhlobo, noma kunjalo ukwenqaba kwakho ukwenza kanjalo kungakuvimbela ekusebenziseni izici ezithile zeSayithi.
Imininingwane amaseva ethu aqoqa ngokuzenzakalelayo lapho ufinyelela isiza, njengekheli lakho le-IP, uhlobo lwesiphequluli sakho, uhlelo lwakho lokusebenza, izikhathi zakho zokufinyelela, namakhasi owabukeze ngqo ngaphambi nangemva kokufinyelela iSayithi.
Imininingwane yezezimali, efana nedatha ehlobene nendlela yakho yokukhokha (isb. Inombolo yekhadi lesikweletu esebenzayo, uhlobo lwekhadi, usuku lokuphelelwa isikhathi) esingaluthola lapho uthenga, uku-oda, ukubuya, ukushintshaniswa, noma ukucela imininingwane mayelana nezinsizakalo zethu kusuka kusayithi. Sigcina kuphela, uma kukhona, ulwazi lwezezimali esiluqoqa kuphela. Ngaphandle kwalokho, lonke ulwazi lwezezimali lugcinwa ngomprosesa wethu wokukhokha, i-PayPal, i-LawPay, futhi ukhuthaza ukuthi babuyekeze inqubomgomo yabo yobumfihlo futhi uxhumane nabo ngqo ukuthola izimpendulo zemibuzo yakho.
Idatha Evela Kumanethiwekhi Omphakathi
Imininingwane yomsebenzisi evela kumasayithi wokuxhumana nomphakathi, njenge-Facebook, i-Google +, i-Twitter, kufaka phakathi igama lakho, igama lakho lomsebenzisi wezinkundla zokuxhumana, indawo, ubulili, usuku lokuzalwa, ikheli le-imeyili, isithombe sephrofayela, nemininingwane esesidlangalaleni koxhumana nabo, uma uxhuma i-akhawunti yakho kokunye zokuxhumana.
UKUSETYENZISWA KULWAZI LAKHO
Ukuba nolwazi olunembile mayelana nawe kusivumela ukukunikeza isipiliyoni esibushelelezi, esisebenzayo nesenziwe ngezifiso. Ngokuqondile, singasebenzisa imininingwane eqoqwe ngawe ngeSayithi ukuya ku:
● Dala futhi uphathe i-akhawunti yakho.
● Khulisa ukusebenza kahle nokusebenza kweSayithi.
● Gada futhi uhlaziye ukusetshenziswa nokuthambekela ukuze uthuthukise umuzwa wakho ngeSayithi.
● Yenza eminye imisebenzi yebhizinisi njengoba kudingeka.
● Cela impendulo futhi uxhumane nawe ngokusebenzisa kwakho iSayithi.
● Phendula izicelo zomkhiqizo nezamakhasimende.
● Vumela ukulandwa kwama-e-vitabu
UKUQALA KWENKCAZELO YAKHO
Singabelana ngolwazi esiluqoqile ngawe ezimweni ezithile. Imininingwane yakho ingadalulwa kanjena:
Ngomthetho noma Ukuvikela Amalungelo
Uma sikholwa ukuthi ukukhishwa kwemininingwane ngawe kudingekile ukuphendula kwinqubo yezomthetho, ukuphenya noma ukulungisa ukuphulwa kwezinqubomgomo okungenzeka, noma ukuvikela amalungelo, impahla, kanye nokuphepha kwabanye, singabelana ngolwazi lwakho njengoba kuvunyelwe noma kudingwa ngu noma yimuphi umthetho osebenzayo, umthetho noma umthetho. Lokhu kufaka phakathi ukushintshana kwemininingwane nezinye izinto ukuvikela inkohliso nokuncishiswa kwengozi yesikweletu.
Uma uthumela amazwana, iminikelo noma okunye okuqukethwe kusayithi, okuthunyelwe kwakho kungahle kubukwe yibo bonke abasebenzisi futhi kungasatshalaliswa esidlangalaleni ngaphandle kweSayithi kwaphakade.
Oxhumana Nabo Kwezenhlalo
Uma uxhuma kwiSayithi ngokusebenzisa inethiwekhi yokuxhumana nabantu, oxhumana nabo kwi-network yokuxhumana nabantu bazobona igama lakho, isithombe sephrofayela nezincazelo zomsebenzi wakho.
Amanye amaqembu wesithathu
Singabelana ngemininingwane yakho nabakhangisi nabatshalizimali ngenhloso yokwenza ukuhlaziywa kwebhizinisi okujwayelekile. Futhi singabelana ngemininingwane yakho nalabo bantu besithathu ngezinhloso zokuthengisa, njengoba kuvunyelwe ngumthetho.
Ukuthengisa noma Ukuqothuka
Uma sihlela kabusha noma sithengisa konke noma ingxenye yezimpahla zethu, sihlangana, noma sitholwa elinye ibhizinisi, singadlulisela imininingwane yakho ebhizinisini elilandelayo. Uma siphuma ebhizinisini noma singena ekuqothulweni, imininingwane yakho ingaba yimpahla edlulisiwe noma etholwe ngumuntu wesithathu. Uyavuma ukuthi lokhu kudluliselwa kungenzeka futhi nokuthi odlulisayo angahle azibophezele ekuhlonipheni esikwenzile kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Asinacala ngezenzo zabantu besithathu owabelana nabo idatha yomuntu siqu noma ebucayi, futhi asinagunya lokuphatha noma lokulawula ukucela komuntu okuvela eceleni. Uma ungasafisi ukuthola imbalelwano, ama-imeyili noma okunye ukuxhumana nabantu abavela eceleni, unesibopho sokuxhumana ngqo nomuntu wesithathu.
Futhi singasebenzisana nabathengisi beqembu lesithathu abakhethiwe, njengeGoogle Analytics, ukuvumela ubuchwepheshe bokulandela umkhondo nezinsizakalo zokumaketha kabusha kwi-Site ngokusebenzisa amakhukhi eqembu lokuqala namakhukhi avela eceleni, phakathi kokunye, ukuhlaziya nokulandela abasebenzisi ' ukusetshenziswa kwesiza, nquma ukuthandwa kokuqukethwe okuthile futhi uqonde kangcono umsebenzi online. Ngokufinyelela iSayithi, uyavuma ukuqoqwa kanye nokusetshenziswa kwemininingwane yakho ngabathengisi beqembu lesithathu. Ukhuthazwa ukuthi ubuyekeze inqubomgomo yabo yobumfihlo futhi uxhumane nabo ngqo ukuthola izimpendulo zemibuzo yakho. Asidlulisi imininingwane yomuntu siqu kubathengisi beqembu lesithathu. Kodwa-ke, uma ungafuni noma yiluphi ulwazi ukuthi luqoqwe futhi lusetshenziswe ubuchwepheshe bokulandela umkhondo, ungavakashela abathengisi beqembu lesithathu noma Ithuluzi Lokukhangisa Ngaphandle Kwenethiwekhi or Ithuluzi Lokuphuma le-Digital Advertising Alliance.
Kufanele wazi ukuthi ukuthola ikhompyutha entsha, ukufaka isiphequluli esisha, ukuvuselela isiphequluli esivele sikhona, noma ukusula noma ukuguqula amanye ama-cookies esiphequluli sakho kungasusa namakhekhe athile wokuphuma, ama-plug-ins, noma izilungiselelo.
IZIBHALO EZIMBILI ZESIKHATHI
Isayithi lingaqukatha izixhumanisi zamawebhusayithi wesithathu nokusetshenziswa kwezintshisekelo, kufaka phakathi izikhangiso kanye nezinsizakalo zangaphandle, ezingahambisani nathi. Lapho usuvele usebenzise lezi zixhumanisi ukushiya isiza, noma yiluphi ulwazi olunikeza laba bantu besithathu alumbozwe yile Nqubomgomo Yobumfihlo, futhi asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo bolwazi lwakho. Ngaphambi kokuhambela nokunikeza noma yiluphi ulwazi kunoma yiliphi iwebhusayithi evela eceleni, kufanele wazise izinqubomgomo nezinqubo zobumfihlo (uma zikhona) zomuntu wesithathu obhekele kuleyo webhusayithi, futhi kufanele uthathe lezo zinyathelo ezidingekayo, ngokubona kwakho, ukuvikela ubumfihlo bolwazi lwakho. Asinankinga nokuqukethwe noma ubumfihlo nezinqubo zokuphepha nezinqubomgomo zabanye abantu besithathu, kufaka phakathi amanye amasayithi, izinsizakalo noma izinhlelo zokusebenza ezingaxhunyaniswa noma kusuka esizeni.
Le webhusayithi isebenzisa ama-Google Amamephu API. Ungathola imigomo yesevisi ye-Google Amamephu API lapha. Ukuze uqonde kangcono inqubomgomo yobumfihlo ye-Google, sicela ubheke kulokhu isixhumanisi.
Ngokusebenzisa kwethu ukusebenza kwe-Amamephu API, uyavuma ukuboshwa Imigomo Yensiza ye-Google.
UKUVIKELA KWELWAZI LAKHO
Sisebenzisa izindlela zokuphepha, ezobuchwepheshe nezokuphepha ngokomzimba ukusiza ukuvikela imininingwane yakho. Ngenkathi sithathe izinyathelo ezifanele zokuvikela imininingwane yomuntu uqobo osinikeza yona, sicela wazi ukuthi ngaphandle kwemizamo yethu, akukho zindlela zokuphepha ziphelele noma azifinyeleleki, futhi ayikho indlela yokuhanjiswa kwedatha engaqinisekiswa ngokumelene nanoma yikuphi ukungena noma olunye uhlobo lokusebenzisa kabi. Noma imiphi imininingwane edalulwe ku-inthanethi isengozini yokungenela nokusebenzisa kabi amaqembu angagunyaziwe. Ngakho-ke, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele uma unikezela ngemininingwane yomuntu.
Asifuni imininingwane ngamabomu evela noma emakethe iye ezinganeni ezingaphansi kweminyaka ye-13. Uma wazi noma iyiphi idatha esiyiqoqe ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13, sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi.
IMIBHANGO YOKWENZA IZIMPAWU ZOKWENZA-HAYI-TRACK
Iningi leziphequluli zewebhu nezinye izinhlelo ezisebenza ngeselula zifaka isici se-Do-Not-Track (“DNT”) noma isethingi ongayisebenzisa ukuze usayine okuthandayo kokuthi ungabi nemininingwane emayelana nokuphequlula kwakho okwenziwa ku-inthanethi kubhekwe futhi kuqoqwe. Alikho isilinganiso sobuchwepheshe obufana nobodwa bokubona nokusebenzisa amasiginali we-DNT oseqediwe. Njengoba kunje, okwamanje asiphenduli kuzimpawu zesiphequluli se-DNT noma enye indlela esetha ngokuzenzakalelayo ukukhetha kwakho ukuthi kulandelwe ku-inthanethi. Uma indinganiso yokulandela ngomkhondo kwe-inthanethi yamukelwa okufanele siyilandele ngokuzayo, sizokwazisa ngalowo mkhuba enguqulweni ebukeziwe yale Nqubomgomo Yobumfihlo.
IMIHLA EMALUNGA NELWAZI LAKHO
Ungaxhumana nganoma yisiphi isikhathi noma ushintshe imininingwane eku-akhawunti yakho noma unqamule i-akhawunti yakho ngo:
● Ukungena kuzilungiselelo ze-akhawunti yomsebenzisi kanye nokuvuselela i-akhawunti yomsebenzisi.
● Ukuxhumana nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikeziwe.
Ngokwesicelo sakho sokumisa i-akhawunti yakho, sizosebenza noma suse i-akhawunti yakho kanye nemininingwane kwimininingwane yethu esebenzayo. Noma kunjalo, eminye imininingwane ingagcinwa kumafayela ethu ukuvimba inkohliso, izinkinga zokuxazulula inkinga, isize nganoma yikuphi ukuphenya, ukugcizelela imigomo yethu yokusetshenziswa kanye / noma ihambisane nezimfuneko zomthetho.
Uma ungasafisi ukuthola imbalelwano, ama-imeyili, noma okunye ukuxhumana okuvela kithi, ungaphuma ngemvume:
● Ukuqaphela okuncamelayo ngesikhathi ubhalisa i-akhawunti yakho ngeSayithi.
Uma ungasafisi ukuthola imbalelwano, ama-imeyili, noma okunye ukuxhumana okuvela kubantu besithathu, unesibopho sokuxhumana nomuntu oqondile.
I-CALIFORNIA PRIVACY rights
ICalifornia Code Code 1798.83, eyaziwa nangokuthi umthetho we "Shine The Light", ivumela abasebenzisi bethu abayizakhamizi zaseCalifornia ukuthi bacele futhi bathole kithi, kanye ngonyaka futhi mahhala, imininingwane mayelana nezigaba zemininingwane yomuntu (uma ikhona) thina kuvezwe kubantu besithathu ngezinhloso zokuthengisa ngqo namagama namakheli abo bonke abantu besithathu esabelana nabo imininingwane yomuntu siqu ngonyaka wekhalenda owandulele. Uma ungumhlali waseCalifornia futhi ungathanda ukwenza isicelo esinjalo, sicela uthumele isicelo sakho ngokubhala kithi usisebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi.
Uma ungaphansi kweminyaka engu-18 yobudala, uhlala eCalifornia, futhi une-akhawunti ebhalisiwe neSayithi, unelungelo lokucela ukususwa kwedatha engafuneki oyithumela esidlangalaleni kwiSayithi. Ukucela ukususwa kwale datha, sicela uxhumane nathi usebenzisa imininingwane yokuxhumana enikezwe ngezansi, futhi ufake ikheli le-imeyili elihlotshaniswa ne-akhawunti yakho nesitatimende sokuthi uhlala eCalifornia. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi imininingwane ayivezi obala kwiSayithi, kepha sicela wazi ukuthi imininingwane kungenzeka ingasuswa ngokuphelele noma ngokuphelele kusistimu yethu.
Uma unemibuzo noma ubeka amazwana ngale Nqubomgomo Yobumfihlo, sicela uxhumane nathi ku:
Izikhungo Zomthetho zikaPatel, uSoltis noCardenas
I-574 Newark Ave, i-Suite 307